अब एमालेले जितेको कुरा कुनै पनि पत्रकारले समाचार लेख्ने अवसर पाउने छैनन्ः मेटमणि चौधरी — newsparda.com
क्षेत्रमा स्वतन्त्रहरूका मत प्राप्ति गरेका ! उक्त सबै कार्य तिमिले बा भनेका खड्गा प्रसाद ओलिले गरेका होइन्न रु दास बन्नुर हुनुको पनि सिमा हुन्छ ! जसले सबैभन्दा बढि दलहरूसँग सहमति र अबैध संझौता गरेका छन् ! तिनैका सन्तानहरू गठबन्धनका बिरूद्दमा बिष बमन गर्नु कत्ति पनि सुहाएन क्या !
२. ५ दल मिलेर जित्ने- यत्रो फूर्ति ! अल्पज्ञानिहरूलाई के थाहा ! यो हार भर्खर शुरू भएको छ र यो हारको श्रंखला निरन्तर अघि बढ्ने छ । अब देखि नेकपा एमाले र बिजयिको बिचमा कहिल्यै भेट हुने वाला छैन । नेकपा एमालेले जितेको कुरा कुनै पनि पत्रकारले लेख्ने अवसर पाँउनैछैन्न । २०७४ सालमा जितेको कुरा कथा बन्नेछ र भाबि सन्ततिहरूलाई सपना जस्तै लाग्नेछ !